musha nyika dzakabatana Vatapi venhau Chris Cuomo Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Chris Cuomo Yehucheche Biography Nyaya.
Yedu Chris Cuomo Biography inokupa iwe nhoroondo yeChinyorwa Chemwana, Hupenyu hwepakutanga, Chokwadi chemhuri, Vabereki, Hupenyu hweRudo (Mukadzi, Vana), Mararamiro, uye Hupenyu hweMunhu. Zvakare, iko kuongororwa kwakazara kweHupenyu Hwake Hupenyu kubva paKutanga Kwemazuva kusvika paakazova Mukurumbira.
Hongu, hatigone kupokana nenyaya yekuti Chris Cuomo akakwira manera emukurumbira kuburikidza nehunyori venhau. Nekudaro, vashoma chete munhu anoziva nezve zvipingamupinyi zveupenyu Chris zvaakapfuura nemuupenyu Hwake Nyaya.
Chikwata chedu chakaisa pamwechete Biology yaChris Cuomo yakazara kubva kumazuva ake eUduku kumukurumbira wake. Iye zvino pasina kumwe kunonoka, ngatitange ne yake Nyaya Yehucheche.
Chris Cuomo Nyaya dzeChidiki:
Kutanga kubva, Christopher Charles Cuomo akazvarwa musi wa9 Nyamavhuvhu 1970 kuna amai vake, Matilda Cuomo, uye baba vake, Mario Cuomo muQueens, New York. Iye ndiye gotwe pavana vashanu akazvarwa paNyubvu pakati pababa vake naamai vake.
Semwanakomana wekupedzisira wemba yake, Chris akanakidzwa nerudo uye rudo rwevabereki vake pamwe nevanun'una vake vakuru. Kuzvarwa mumhuri yakapfuma chaive chikomborero chaChris aive neUkomana hwaiyerera nezvose zvaaida semukomana mudiki.
Chris Cuomo Mhuri Dzinobva:
Kunyangwe iye akazvarwa uye akakurira muQueens, New York, Cuomo hapana mubvunzo kuti anobva kuItaly. Kutarisa pamadzinza ake kunoratidza kuti vanasekuru nasekuru vake vaive vekuNocera Inferiore neTramonti ayo ane mbiri maguta kumaodzanyemba kweItari.
Uyezve, sekuru vaCuomo vanababa vanokudzwa kubva kuSicily inova chimwe chezvitsuwa zvikuru muGungwa reMedithera uye imwe yematunhu makumi maviri eItari. Mutori wedu wenhau anozivikanwa angadai akadzidza kutaura mitauro yemadzitateguru ake - Italien - dai anga akakurira muItari. Kunyange zvakadaro, midzi yemhuri yake ichagara iri chikamu cheBiography yake zvisinei nemutauro waanotaura.
Chris Cuomo Mhuri Yemashure:
Chimwe chinonakidza chokwadi nezve Cuomo ndechekuti akazvarwa muFamily Background iyo yakavaka hutungamiriri portfolio nguva yakawanda. Aingova nemakore gumi nemaviri apo baba vake, Mario Cuomo vakasarudzwa gavhuna weNew York City. Makore mazhinji gare gare, mukoma wake mukuru Andrew Cuomo zvakare akakwira hofisi yemubati weNew York.
Izvo zvaiita sekunge hunhu hwehutungamiriri hunomhanyisa kuburikidza nemitsipa yeMhuri yake. Ndokusaka mudiki Chris akakwanisa kudzidza asingazivi nezve hunhu hwehutungamiriri kubva kuna baba vake nemukoma. Nekufamba kwenguva, Chris neveimba yake vese vakatamira kuimba yaMagavhuna muAlbany mavaigara kusvika baba vake vasiya chigaro muna 1994.
Chris Cuomo Kurarama Kwepakutanga:
Kukura muNew York, Chris haana kuwana mukana wekushandisa nguva yakakwana nababa vake vaive zvino vapinda mune zvematongerwo enyika. Pakushaikwa kwababa vake vanoshanda nesimba, Chris aigarotarisirwa nemunun'una wake mukuru, Andrew.
Kuedza kwakanaka kwababa vaChris kunyatsogadzirisa kupanikira nyaya dzine chekuita nevanhu vaye kwakaita kuti pasave nechido chinoshanduka kuna Chris. Akatanga kuronga nzira dzaanogona kupawo mhinduro kumatambudziko evanhu. Saka, Chris akasarudza kuita basa reMutemo uye kuve izwi rinogona kubatsira vanhu vazhinji.
Chris Cuomo Dzidzo:
Kurota kwake kwekuve izwi revakuru kungadai kwakangoramba kuri kurota dai asina kushandira kuzadzisa icho. Pane ichi chinyorwa, Chris akanyoresa kuThe Albany Academy muNew York uye akaenda kuYale kwaakawana dhigirii rake redhiabhiri.
Dzimwe nguva hupenyu hunopedzisira hwoputika murume mumatenderedzwa kusvikira agadzirira zvizere kutarisana nekumira. Panguva ino kutenderedza, Chris akabatsira kudzidzira kwake mukutsvaga kuwana degree mune mutemo.
Ehe, akapedza kuda kwake kuFordham University uye akawana Juris Doctor (JD) mugore ra1995. Paakapedza kudzidza, Chris anogona kunge akanzwa pfungwa huru yekuita basa sezvo anga achingova danho rimwe chete kubva pakuwana basa rakabudirira.
Chris Cuomo Kurarama Kwepakutanga Hupenyu:
Kuwana basa kwaive nyore chaizvo kuna Chris uyo aive asarudza huwandu hwemubhadharo wemutemo - Wall Street Gweta - muNew York. Munguva pfupi iye akazova mumwe wevanotsvaga-zvakanyanya kutsvaga muNew York uye akaiswa pakati vanhu magazini Vakanaka kwazvo Vanhu.
Nekufamba kwenguva, Chris akarasikirwa nekufarira mutemo sezvo iye achiona zvisingagutsa. Iye akabva afunga kutora chijana uye kusvetukira muenhau. Kuva gweta rakamiswa uye rakakurumbira kwakaita kuti zvive nyore kuti Chris awane basa kwenguva pfupi kuCNBC, MSNBC, uye CNN.
Chris Cuomo Mugwagwa weFame Nhau:
Kutora danho kubva pamutemo uye kutanga basa rekutapa nhau kwakauya nedambudziko rakakura kuna Chris; Mhuri yake isingafarire danho rake. Baba vaChris vaiona sekuti utori venhau yakanga isiri fomu rekushandira vanhu. Naizvozvo, zvingadai zvakave zvirinani kana Chris akaramba ari gweta pane kuenderera mberi semutori venhau.
Nekutarisana nekusagadzikana kwemhuri yake, Chris akaramba achibudirira. Iye aive akatarisana uye akatsunga zvizere kuita chikuru kuita mune rake nyowani basa. Nekudaro, Chris akave munyori weFox News uko akafukidza zvinetswa zvakawanda zvine chekuita nenyaya dzemagariro.
Chris Cuomo Rise kune Mukurumbira Nyaya:
Pasina nguva iri kure, Chris 'akave co-anchor weABC 20/20 uye akafukidza nyaya dzakawanda dzinonakidza. Nhau dzake dzaisanganisira kufukidza nezveHeroin kupindwa muropa, kudheerera, kuchengetwa kwevana, vechidiki vasina pekugara, uye kudengenyeka kwekutaura mashoma. Kubudirira kwaChris kwaive kwakatanhamara kuti baba vake vakasara vasina sarudzo kunze kwekumutenda nezvavakaita.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekuburitsa iyi Biography, mutori wedu wenhau anozivikanwa akashanda neNhau Nhepfenyuro dzakasiyana siyana CNN. Pamwe pamutsetse, Chris akagamuchira Mitsara yakawanda yebasa rake raitwa zvakanaka muCommunication Trade.
Kushanda neCNN kwaive kuchizadzisa kuna Chris Cuomo. Ikoko akasangana nemumwe weanovimbika weTV anchors uye Newscaster, Don Lemon. Vaviri ava vakave shamwari uye pasina nguva iri kure, mazita avo akakurumbira mukutapa. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Chris Cuomo Hukama Hupenyu Chokwadi - Musikana, Mukadzi, uye Vana:
Mutori wedu wenhau weAmerican terevhizheni anongova nemusikana mumwe chete akatendeuka kuva mukadzi kubva paKasimukira Mukurumbira. Saka, iye akaroora panguva yekunyora iyi Bio. Kunyangwe Chris airemekedzwa sejaya rakanaka kwazvo achiri kushanda segweta, akaramba akatarisana. Haana kuzvinetsa nenyaya dzemoyo kusvika asangana naGotham magazini mupepeti Cristina Greeven.
Mutori wenhau wechidiki uyu akamira asingataure pamberi pe rudo rwake rutsva sezvo moyo wake wairova zvinoshamisa sedhiramu dzeBrazil. Iye naCristina vakatanga kufambidzana uye munguva pfupi vakasarudza kuchata. Vaviri vacho vakaroora muchechi yeRoman Catholic mugore ra2001 kuSouthampton, New York.
Vana vaChris Cuomo:
Varoorani vachangobva kuchata vaigara mukuwirirana uye nekunzwisisa. Chokwadi ndechekuti, zvaive nyore kwavari kuti vanzwisise zviga zveumwe neumwe kubva zvavakashanda muKambani Yekukurukurirana.
Nekufamba kwenguva, Chris akakomborerwa nevanasikana vaviri vakanaka; Bella naCarolina Regina pamwe nemwanakomana; Mario Cuomo. Mutori wedu wenhau akapembererwa anogara nemukadzi wake nevana vake vatatu paanogara kuManhattan.
Chris Cuomo Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Kunyangwe Chris akazviita izvi nekuda kwekuedza kwake uye kushanda nesimba, asi zvakadaro akawana mamwe marudzi ekutsigirwa kubva kune veimba yake. Pazasi pane ruzivo rwakadzama nezve mumwe nemumwe wemhuri yake anotanga naamai vake.
Pamusoro paamai vaChris Cuomo:
Amai vaChris 'ndiMatilda Cuomo. Iye akazvarwa musi wegumi nematatu waGunyana 16. Pakutanga, akashanda semudzidzisi kusvika akwira muhofisi yeFirst Lady yeNew York kubva 1931 kusvika 1983.
Semunhu wese nhengo yemhuri yekwaCuomo, Matilda akagadzirirwa kubatsira vanhu vazhinji. Pane ichi chinyorwa, akazova mumiriri wehupenyu hwese kuvana, vakadzi, uye mhuri. Unoziva here?… Matilda Cuomo ndiye muvambi we Kutarisira USA isiri purofiti sangano. Hwemagamba ake emipiro akamuwanisa kupinza muNational Women Hall of Fame mugore ra 2017.
Nezve Baba vaChris Cuomo:
Mario Matthew Cuomo ndiye baba vaChris Cuomo. Nokutendeseka, Mario akagadzira chaizvo zvinoshamisa mukurarama kwake. Akazvarwa musi wa15 Gunyana 1932, Mario akashanda nematambudziko ehupenyu kuitira kuti ave nehunyanzvi kumhuri yake.
Asati afa munaJanuary 2015, Mario akashanda segweta uye akabva awedzera basa rake nekunyepedzera mune zvematongerwo enyika. Aive matatu matatu anoshanda gavhuna weNew York City mukati mehupenyu hwake. Chokwadi ichi chinoramba chiripo chekuti Chris nehama dzake vakatora chimiro chavo kubva kuna baba vavo.
About Chris Cuomo's Siblings:
Kuve mudiki wemhuri, Chris Cuomo akakurira kuva hunhu hunoshamisa, nekuda kwekutsigirwa kwevakuru vevakoma vake. Chris ane vakuru vatatu hanzvadzi dzinoti; Margaret (radiologist), Maria (mugadziri wemamuvhi), uye Madeline (gweta).
Chris zvakare ane mukoma mukuru anonzi Andrew Cuomo uyo akaita chikuru kuita munyika yezvematongerwo enyika sababa vake. Sezvineiwo, Andrew akafanana nababa kuna Chris uye akashanda seGavhuna weNew York kwematatu matatu.
About Chris Cuomo's hama:
Kuenderera mberi kumadzitateguru edu akatambwa mutori wenhau, vanasekuru nanamai vake vaive Charles Raffa naMary Gitto. Pese sekuru vake nasekuru naambuya ndiAndrea Cuomo naImaculata Giordano.
Chris akakomborerwawo neakawanda akanaka maiguru. Zvisinei hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezvevatezvara vake, babamunini, uye babamunini. Mimwe yemadzikoma ake anozivikanwa anosanganisira; Cara Kenedy, Mariah Kenedy, Catie Cole, Amanda Cole, Marianna Cuomo Maier, uye Michaela Cuomo.
Chris Cuomo Nhamba Yehupenyu Hwechokwadi:
Kunyangwe achive gweta rakazara rezenisi uye mutori wenhau wenguva yakazara, Chris Cuomo achiri kushandisa imwe nguva yemunhu ega kubva kubasa. Dzimwe nguva, anoenda kumahombekombe kunotonhorera nemukadzi wake nevana.
Kutarisa paChris 'horoscope kunoratidza kuti iye musanganiswa wea Leo zodiac maitiro. Iye ane chivimbo, anotonga, uye ane pfungwa yekuita. Chris anofarira kurovedza muviri uye anoshanda nesimba kuti muviri wake ugare wakasununguka.
Chris Cuomo's Lifestyle Chokwadi:
Panguva yekunyora Chris Cuomo's Life Nyaya, wake Net Worth anofungidzirwa kuve unowedzera mari inosvika pamamiriyoni gumi nemaviri emamiriyoni. Sezvineiwo kune mutori wedu wenhau anofara, anogamuchira mubairo wepagore wemamiriyoni matanhatu emadhora kubva kuCNN.
Chris Cuomo's Assets:
Senge mamirioni, Chris nemhuri yake yese vanogara hupenyu hwoumbozha. Iye nemukadzi wake vakatenga imba inokwana kuita mamirioni mazana maviri emamiriyoni emadhora muna 1.3 iyo yavakazotengesa nemadhora zviuru zviviri zvemadhora muna Chivabvu 2001. Imba yacho yaive imba inamakamuri mashanu yekurara yakatenderera nemamita zviuru mazana matatu.
MunaJune 2011, maCuomos akatenga imba yakasarudzika pamadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemashanu emadhora. Kuti awedzere pazvinhu zvavo, Chris anotori nemota dzakateedzana dzemoto dzaanoshandisa kufambisa. Zvine kusuwa, akapaza yake 2.995 Pontiac Firebird inotendeuka muna 1969.
Chris Cuomo's Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Chris Cuomo's Life Nyaya, heano zvimwe zvishoma-kuzivikanwa chokwadi nezvake zvingakubatsira iwe kuti unzwisise Biography yake zvizere.
Chokwadi # 1: Hutano Hwemhuri Hutsinye: Iyo Corona Virus Turmoil:
Tichitarisana nedenda reCovid-19 iro ratora hupenyu hwezviuru zvevanhu, Chris Cuomo akaita chiziviso chinotyisa pamusoro pekufamba kwemakumi maviri neshanu 31 kuti akaonekwa aine hutachiona. Mushure mekuparadzira nhau kuruzhinji, akaenda kunozvisarudzira uye akatanga kushambadza showo yake kubva kumba.
Hutachiona hwakave nekunetsa kuna Chris uyo anoti akatanga kuyeuka nezve baba vake vakafa nekuda kwezviratidzo zvechirwere. Nehurombo kuna Chris, mudzimai wake nemwanakomana wake ane makore gumi nemana vakaongororwawo hutachiona.
Chris akarererwa semuKaturike aiita semamwe ese emhuri yake. Ndosaka muchato wake wakaitirwa muchechi yeRoma. Zvakawanda sezvaanobatirira pakutenda kwake, Chris anova nechokwadi chekuti kutenda kwake kunogara kuchitsigirwa nezvikonzero nehunhu.
Mutori venhau weCNN akambotaura kuti aive akanganisa. Chikonzero chekuti ari diki pamakore gumi nematanhatu pane mukoma wake mukuru. Chokwadi ndechekuti, Chris Cuomo ainzwa kuti dai vabereki vake vaimuda chaizvo, vangadai vasina kupa makore akura kudaro vasati vamubereka.
Pazasi pane wiki zivobase yaChris Cuomo. Tafura yacho ichanyatsoita uye zvinobudirira kuti ubatsire kuwana ruzivo nezvake. Tsvaga pazasi
Zita rizere: Christopher Charles Cuomo
Nick Zita: Fredo
Zuva rekuzvarwa: 9th August, 1970
Nzvimbo yekuzvarirwa: Queens, New York
Baba: Mario Matthew Cuomo
Amai: Matilda Cuomo
Vanun'una: Andrew, Margaret, Maria, uye Madeline Cuomo
Hama: Charles Raffa naMary Gitto (vanasekuru nanambuya)
Andrea Cuomo naImaculata Giordano (vanasekuru nasekuru)
Mukadzi: Cristina Greeven
Vana: Bella, Carolina Regina, uye Mario Cuomo
Net Worth: $ Miriyoni 12
Mutengo wegore negore: $ Miriyoni 6
kukwirira: Mumamita - 1.88 m
Mune tsoka - 6 ′ 2 ″
Mhuri yaCuomo yakabudirira uye vese vanogovana hunhu hwakafanana- ndiko kutsunga. Kurota kwaChris hakuna kuzova chaiko kuburikidza nemashiripiti. Zvakatora ziya, kutsunga uye kushanda nesimba. Tiudze zvaunofunga pamusoro pazvo muterevhizheni weAmerican terevhizheni mune chikamu chekutaura.
Mufananidzo Unopa: Mutori venhau CNN Chris Cuomo kumusangano we 2016 Democratic National Convention by Senator Chris Coons iri munzvimbo yeruzhinji muUnited States. Mufananidzo wepakutanga wakatorwa kubva ku Flickr.